मिठो निन्द्रा निदाउन चाहनुहन्छ ? यसो गर्नुहोस् - Khabar Break | Khabar Break
मिठो निन्द्रा निदाउन चाहनुहन्छ ? यसो गर्नुहोस्
दिनभरीको काम र ब्यस्त जिवनीले गर्दा बेलुका हाम्रो शरिर निक्कै थाकेको हुन्छ । तर पनि राती बिच्छ्यौनामा पल्टिँदा धेरै जसो मानिसलाई सजिलै निन्द्रा लाग्दैन । यस्तो हुनुमा हाम्रो अव्यवस्थित जिवनशैली जिम्मेवार छ ।
यदि तपाई राम्रोसँग सुत्न चाहानुहुन्छ भने राती सुत्नुअघि कहिल्यै नगर्नुहोस यी काम
हाम्रो स्वास्थ र शरिरको लागि व्यायाम एकदमै महत्वपूर्ण कुरा हो तर राती सुत्न भन्दा कम्तिमा तिन घन्टा अगाडी नै गरेको राम्रो । किनभने एक्सरसाइजले शरिरको तापक्रम बढाँउछ र सुत्न असजिलो बनाँउछ त्यसैले सुत्न अघि कहिल्यै पनि एक्सरसाइज नगर्नुहोस ।
अध्ययनहरुका अनुसार सुत्न अघि स्क्रिन हेर्नाले तपाईको शरिरको निदाउने क्षमतामा ह्रास आँउछ । किनभने स्क्रिनहरुको उज्यालाले मेलाटोनिन नामक हर्मोनको विकासमा बाधा पुर्याउँछ जसले सुत्न सहयोग गर्छ । त्यसैले राती सुत्नु भन्दा एक घन्टा पहिले नै ल्यापटप, कम्प्युटर वा टिभी बन्द गर्नुहोस ।
तातो पानीले नुहाउनाले तपाईको शरिरको तापक्रम बढाँउछ । तातो बढ्नाले र पसिना आउनाले तपाईलाई सुत्न गाह्रो बनाँउछ । त्यसैले सुत्नु अघि शरिर चिसो बनाउनुहोस ।
क्याफिन र अल्कोहल दुवैले राती सुत्न गाह्रो बनाँउछ । यसैगरी सुत्नु अघि एक दुई घन्टा भित्र धेरै तरल पदार्थ पिउनाले बाथरुम धेरै जान पर्ने बनाँउछ र तपाँईको निन्द्रा बिथोल्न सक्छ । तर फेरी पानी पिउँदै नपिउनाले पनि तपाईलाई राती तिर्खा लाग्न सक्छ त्यसैले यसमा ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ ।
तपाईको जति नै महत्वपूर्ण काम भएपनि राती गर्नु भन्दा बिहानै उठेर गर्दा राम्रो हुन्छ । किनभने सुत्नुअघि काममा ध्यान केन्द्रित गर्दा तपाईको दिमाग उत्तेजित हुन्छ र तनाव उत्पन्न हुन्छ जसले राम्रो सँग निदाउन दिँदैन् ।एजेन्सी